Ukucaciswa kovavanyo -Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Qinisekisa ukuba iimveliso zenkampani ziyahlangabezana neemfuno zabathengi, zibonelela ngesiseko sokuhlolwa kwemveliso, kunye nokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Lo mgangatho usebenza kuzo zonke iimveliso zemodyuli ye-TFT eveliswe nge-XX.
Umatshini wokulinganisa umbane, isixhobo sovavanyo, ukukhulisa iglasi, isibane se-fluorescent, i-vernier caliper
Isampulu yesicwangciso kunye nokujonga iimeko zokusingqongileyo
Iyunithi yokuvelisa (okanye inkqubo ye-QC) yenza uhlolo olupheleleyo lokujonga ukubonakala kunye nokuvavanywa kokusebenza kombane, kunye nemilinganiselo yesayizi okanye uhlolo olukhethekileyo, isiqwenga sokuqala semodeli nganye sisampulu kwaye savavanywa ii-5pcs.
Iyunithi esemgangathweni ilinganisa ii-5pcs kwisampulu yokuqala yemodeli nganye, kwaye yamkela i-GB / -2012 yovavanyo oluqhelekileyo lwexesha elinye lesampulu yokujonga ukubonakala, kwaye inqanaba lokuhlola ngokubanzi li-II.
Inqanaba elingafanelekanga Inqanaba elivumelekileyo Uvavanyo lomgangatho ofanelekileyo
Ukusilela okukhulu Ukuba ubungakanani bunesiphene, yi-0 fumana 1 ukubuya
Umvavanyi kufuneka anxibe iringi yombane kunye neebhloko zeminwe ezisibhozo ezandleni zozibini.
Umvavanyi unokujonga okanye athelekise netafile yokuthelekisa ifilimu.
Nceda ujonge isampulu kuvavanyo lombane usebenzisa isixhobo sovavanyo kunye nescreen sokubonisa.
Umgama phakathi kwamehlo omhloli kunye nemveliso yi-30 ~ 40 cm. I-engile yokujonga ukujonga yi-± 15 degrees kumbono wepaneli yokubonisa ethe nkqo kunye ne-± 45 degrees kumbono wangaphambili wepaneli yokubonisa ethe tyaba (jonga inani elingezantsi)
Ukukhanya kwendalo esingqongileyo: 800 ～ 1200LUX yovavanyo olubonakalayo
Ubushushu bendalo: 25 ± 5 ℃
Ukufuma: 25 ~ 75% RH
(1) Inkcazo yeziphene zamanqaku ezibangelwa ziiphaneli zangaphakathi.
a) Amabala aqaqambileyo: amachaphaza aqaqambileyo, angatshintshi avela kwiLCD phantsi kwepateni emnyama.
b) Amachaphaza amnyama: Kwimifanekiso emsulwa ebomvu, eluhlaza naluhlaza okwesibhakabhaka, amachaphaza amnyama anobukhulu obufanayo avela kwiLCD.
c) Amanqaku ama-2 akufutshane = 1 isibini = 2 amanqaku.
into inkcazo Ubungakanani obamkelekileyo MAJ MIN
Iimbalasane ngokungacwangciswanga N3 √
Amanqaku amabini akufutshane N≤0
umgama Ubuncinane bomgama phakathi kwamabala amabini aqaqambileyo 5mm
indawo emnyama ngokungacwangciswanga ≤4 √
Inani elipheleleyo lamabala amnyama kunye neendawo eziqaqambileyo N6 √
umgama Ubuncinane bomgama phakathi kwamabala amabini aqaqambileyo (amabala amnyama) 5mm √
Amagqabantshintshi amancinci D≤can be ignored，<D≤, N≤4,spacing≧5mmD（Point diameter） √